5 Khaladaadka Miisaaniyadda Suuqgeynta ee laga Fogaado | Martech Zone
Monday, August 14, 2017 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Mid ka mid ah macluumaadka ugu badan ee la wadaago ee aan sameynay ayaa la hadlay Miisaaniyadda Suuq-geynta SaaS iyo dhab ahaan boqolkiiba wadarta dakhliga shirkadaha qaarkood ay ku bixinayeen si ay u ilaaliyaan una helaan saamiga suuqa. Adoo dejinaya miisaaniyaddaada suuq geynta boqolkiiba guud ee dakhliga, waxay siineysaa kooxdaada suuq-geynta inay si kordhineysa u kordhiso baahida kooxdaada iibka ahi ay u baahan tahay. Miisaaniyadaha isdaba jooga ahi waxay soo saaraan natiijooyin fidsan… ilaa aad ka hesho keyd meel ku dhex jira.
Sawir-gacmeedkan ka socda Xayeysiinta MDG, 5 Khalad Khaladka Miisaaniyadda Suuqgeynta ee laga Fogaado, waxay muujineysaa shan meelood oo khaladaadka xukunku u horseedayo qarash bixin aan fiicnayn iyo sidoo kale sida mudnaanta loo siiyo waqtigaaga, tamartaada iyo miisaaniyaddaada marka la fulinayo istaraatiijiyad suuqgeyn
Khaladaadka Miisaaniyadda Suuqgeynta:
Ka bilow Xog Xun - Shirkaduhu waxay rumaysan yihiin in 32% xogtoodu khaldan tahay, celcelis ahaan. Xogtan aan la isku halleyn karin, oo u dhaxeysa wax aan jirin Analytics dashboodyada farqiga ugu weyn ee keydka macluumaadka macaamiisha, waxay si toos ah ugu xirmaan xulashooyinka miisaaniyadda xun.
Ku guuldaraysiga Isku-dubaridka iibka - 50% dadka wax iibiya kuma qanacsana dadaalka suuqgeynta shirkadooda. Miisaaniyad kasta oo suuqgeyn ah waa in lagu horumariyo iyadoo lala kaashanayo waaxyaha kale, gaar ahaan iibka. Intaa waxaa dheer, kharash kasta waa inuu si toos ah ugu xirnaadaa natiijada ganacsiga ee la filayo.
Hoos-u-dhigista Shaqo-bixiyeyaasha la xaqiijiyay - 52% dadka suuqleyda ah waxay yiraahdaan emaylku waa mid kamid ah wadiiqooyinka wax ku oolka ah ee ay adeegsadaan laakiin suuqleyda ayaa inta badan miisaaniyada ku riixa istiraatiijiyado kale inkastoo waxtarka emaylka. Waxaa muhiim ah in la sii wado kordhinta maalgashiga waxa horay u shaqeynayay.
Yaraynta Xawaaraha Isbedelka - Sannadka 2017, dijitaalka waxaa loo qoondeeyay inuu xisaabiyo 38% wadarta qarashka xayeysiiska Mareykanka, waxaana soo baxaya tiro teknoolojiyad cusub ah oo sii wadi kara kor u kaca degdegga ah ee ay dijitaalku bixisay sannadaha soo socda.
Qiimeynta Wax Aad U Yar, Si Aad U Yar - 70% shirkaduhu si joogto ah uma tijaabiyaan ololayaasha suuqgeynta. Suuqyayaashu waxay u baahan yihiin inay si dhakhso leh u tijaabiyaan una kala dhex galaan dhexdhexaadiyaasha suuqgeynta, kanaalada, iyo istaraatiijiyadaha iyagoo adeegsanaya an istaraatijiyad suuq geyn.
Tags: xog xunmiisaaniyaddaisbeddelDataEmail Marketingqiimayntamarketingmiisaaniyadda suuqgeyntacusubKordhinta Iibkaimtixaanka
La qabsiga iyo ka jawaab celinta Jawaab celinta waxay keenaysaa Natiijooyinka Suuqgeynta Mawduuca
Agoosto 14, 2017 saacaddu markay ahayd 10:02 PM
Hadda waxaan ahay COO for a incubator magaallooyinka halkan ku yaal Indy, the Grindery. Iyo sheyga kaliya ee aanan u muuqan karin inuu guriga ku kaxeynayo waa muhiimada xogta. Waxaan ku noolnahay adduun leh xog dheeri ah, falanqeyn, iyo karti aan dhab ahaan ugu dabaqi karno macluumaadkaas si aan u gaarno go'aanno KASTA Haddana, waxaan hayaa wada-hadallo ku bilaabmaya, ".. Waxaan dareemayaa inaan ahay .." ama "… waxa aniga ila eg…". Waxaan ku weydiinayaa, muunad noocee ah ayaad qaadatay? Muxuu xogtaasi tilmaamayaa?
Kani waa macluumaad aad u qabow, waana ku mahadsan tahay xigmadaada. Hadda, waxaan u socdaa webinar on saas email qaar ka mid ah